I-Pokémon tattoo: zifumane zonke! | Ukuzoba
Ndiya kuba ngoyena ubalaseleyo, oyena ubalaseleyo uya kuze kubekho. Unobangela wam kukuba ngumqeqeshi emva kovavanyo lwam olukhulu lokwenyani. Ndiya kuhamba nakweyiphi na indawo, ndiya kufikelela nakweyiphi na ikona. Ekugqibeleni ndiza kukwazi ukutyhila amandla akuPokémon.
Ukuba uyayazi ingoma (kwaye ngoku utsiba ngathi uyaphambana) le yiposti yakho, ukusukela oko Siza kubona ezinye iimbono zokufumana tattoo yePokémon, enye franchise idumileyo kakhulu Nintendo (kwaye ungakhathazeki, ukuba ungaphezulu IiTatoo zeMario sinenye iposti yakho).
1 Iingcamango zePokemon tattoo
1.1 Ndikhethe iBulbasaur. Kwaye wena, ukhethe bani?
1.2 Umlinganiswa owuthandayo kunye nawe ngonaphakade
1.3 Imiboniso efanele ukungafi
1.4 Iipixels ezifana nezindala
1.5 Ujikeleze kunye neePokéballs ezincinci eziza kukubamba
2 Iingcebiso zokwenza i-Pokemon tattoo ikhanye
Iingcamango zePokemon tattoo
Namhlanje sihla sisebenze kwangoko ukuze sikunike izimvo zokwenza iPokemon chop yakho ibe yodwa. Sicinga ukuba udlale imidlalo yevidiyo okanye ubuncinci ulubonile uthotho. Nokuba yeyiphi na imeko, ingxabano yezi zibini inokushwankathelwa ngendlela elula kakhulu: uPokémon oqeqeshiweyo osemsebenzini ukhetha iPokémon yakhe yokuqala kwaye aphume aye kubona umhlaba.
Ndikhethe iBulbasaur. Kwaye wena, ukhethe bani?
Masiqale ngeziseko: Ngaba ukhe wacinga ngokufumana tattoo ngePokémon oyithandayo? Umfana wam wenza njalo. Ngale Krisimesi undinike umvambo kaZelda kwaye wazinika enye yeBulbasaur, iPokémon yakhe ayithandayo, kwaye iyathandeka (bobabini; iPokémon kunye nesithandwa sam).
Into endifuna ukuyithetha yile ngokuqinisekileyo ukuba ungumntu othanda iPokémon sele unayo ibug yakho oyithandayo; Kodwa ingaba yingcamango enomdla ukuyinika i-twist kwaye ukhethe uyilo olusondeleyo kuwe kunye nobuntu bakho. Umzekelo, iBulbasaur yesithandwa sam ilele kwaye inamagqabi eginkgo emva kwayo (iginkgo ngumthi awuthandayo).
Ngokuqhelekileyo Abalandeli bePokémon bathanda nakweyiphi na i-Pokémon yesithathu yesizukulwana esakhe saphila. Ngokuqinisekileyo ezona ntsomi zibalaseleyo, ngokuba ngowokuqala, nguCharmander, inamba ethandekayo, iSquirtle, ufudo olubi kunye nelona libalaseleyo emhlabeni, iBulbasaur, nangona kungafuneki silibale ezinye izilo ezincinci ezinokuthi, nangona bezingeyiyo eyokuqala, ziphantse zaziva zifana. yelegend kwaye oko kunokukunika izimvo ezipholileyo kakhulu kwi tattoo yasekuqaleni. Umzekelo:
Jigglypuff, eyona bhola yepinki ethandekayo ... kwaye inzima. Yipeyinte njengakuluhlu, kunye ne-microphone kunye ne-marker esandleni esilungele ukupeyinta ubuso bomntu omhle olala ephulaphule ii-ballads zakhe ukuze azenzele ukuzonwabisa. Ngapha koko, le Pokémon iyintsomi kangangokuba ibonakala nakwizavenge zeminye imidlalo yevidiyo, efana neSuper Smash Bros.
Cubone, iPokémon enembali elusizi nejijekileyo. Mhlawumbi yiyo loo nto ingumlinganiswa ophambili wee tattoos. Ngaba ubusazi ukuba ukakayi olusentlokweni yakhe lolukanina, owasweleka emkhusela kwiQela leRocket? Uthotho olufana noludala alusasenziwa...
eevee... Unokukhetha enye okanye isiqwenga esineenkcukacha kunye nazo zonke ii-evolutions kunye.
Umlinganiswa owuthandayo kunye nawe ngonaphakade
Inyani ekhaya besisoloko James kakhulu, of Team Rocket, kuba akakho umntu onjengaye okwaziyo ukusebenzisa isiketi. Nangona kunjalo, amaqhawe akho ebuntwaneni anokungabandakanyi uninzi lwabangendawo njengabanye babaqeqeshi balo abaninzi. Phakathi kwezona ntsomi, ewe, nguAsh, owokuqala kuzo zonke, ungxamile kwaye unenkani, kunye noMisty okanye uBrock, amaqabane akhe okuqala.
Ukuba ufuna into ekhethekileyo, Unokukhetha umqeqeshi wejim onobudlelwane obukhethekileyo okanye uNjingalwazi Oak, ekunika ukuba ukhethe iPokémon yakho yokuqala kwimidlalo kwaye iyeyesibini kuthotho.
Imiboniso efanele ukungafi
Ukuza kuthi ga ngoku sithethe ngabalinganiswa kunye nePokémon, ngoku sinokuthetha ngemiboniso ebekwe inkwenkwezi kwaye banokuba yinto efanelekileyo kwabo bafuna tattoo enkulu kakhulu.
Umzekelo, enye yezona ndawo zintsomi nezikhunjulwayo yi Idolophu yaseLavender, enokuba nentsomi yayo yasezidolophini (okanye "creepypasta", njengoko ulutsha lwanamhlanje lusitsho). Ngokwentsomi, umculo weDolophu yaseLavanda wawunezandi eziye zakhokelela amakhulu abantu ukuba bazibulale… Ngaphandle kwamathandabuzo yindawo yokukhumbula!
Las ukubaleka okupholileyo kwibhaluni yeQela leRocket yeMeowth Ziyezinye zeemboniso ezinokuthi zisebenze ngokugqibeleleyo kwi tattoo eyonwabileyo apho i-protagonists nguJese noJames kwaye, ngokuqinisekileyo, uMeowth, uPikachu wakhe othile. Yinike intshukumo ngebhaluni egqobhoziweyo ibhabha esibhakabhakeni. I-Rocket yeQela iyaqalisa kwakhona!
Ewe kunjalo, asinakulibala amakhulu eemfazwe zePokémon ezenzekileyo kulo lonke uthotho kunye nemidlalo yevidiyo. Nokuba inobuhle bepixel okanye isekwe kwi-anime okanye imidlalo yamva nje, kungcono ukhethe iPokémon yakho oyithandayo kunye nentshatsheli yayo, okanye enye iPokémon oyithanda kakhulu. Thatha ithuba lokubabonisa ngohlaselo lwabo ludumileyo, njengesabhokhwe seBulbasaur.
Iipixels ezifana nezindala
Kwabo bethu bakhule neGame Boy, i-NES, okanye i-SNES, akukho nto ibuhlungu ngaphezu kweepikseli. Unokwenza amaqhinga okwenyani ngezi zikwere zincinci zilula kangangokuba zilinganisa iimvakalelo zaloo midlalo yokuqala. Khumbula ukuba, nangona zikhanya ngakumbi ngombala, ekuqaleni iGame Boy yayimnyama namhlophe, enokuthi inike umdlalo kwi tattoo ngokusekwe kubuhle bokwenyani bePokémon ngelo xesha.
Ujikeleze kunye neePokéballs ezincinci eziza kukubamba
Ukuba awufuni ukwenza tattoo nayiphi na iPokémon kodwa ungumntu othanda i-saga, ungakhetha naziphi na ezinye iisimboli zayo, ezinje ngePokéballs. Ukuba uyidlalile imidlalo, sele uyazi ukuba kukho ii-Pokéballs zokunika kwaye uzithengise ezikuncedayo ukubamba eyona Pokémon inzima.
Uyilo olunePokéball lunokuba luncinci kwaye lulumke, ilungile ukuba awufuni ukuyila okukhulu kakhulu okanye ufuna into yokugqoka, umzekelo, kwisandla.
Iingcebiso zokwenza i-Pokemon tattoo ikhanye
Ukugqiba, makhe sibone iingcebiso ezimbalwa zokwenza i-Pokémon yakho ibonakale kwaye ihluke njengenye, into ebalulekileyo ukuze ungadinwa emva kweentsuku ezimbini zayo:
Thatha inzuzo epheleleyo yombala. I-Pokémon, nangona ekuqaleni kwayo kwi-Game Boy inqunyelwe kumnyama nomhlophe, luchungechunge lweTV kunye ne-franchise eyonwabisa kakhulu, zombini isicwangciso sayo kunye nobuhle bayo. Ngoko ke, kwi tattoo ngalo mxholo, umbala ubalulekile, ukhanyisa ngakumbi kwaye ungcono. Khumbula, umzekelo, ukuba imibala emibini echaseneyo inokunika ubomi obuninzi kuyilo, umzekelo, ukudibanisa i-Bulbasaur, eluhlaza ngokupheleleyo, eneenkcukacha ezibomvu, i-orenji, i-yellow, ipinki ...
Ngaphandle kombala, isitayela se tattoo sibaluleke kakhulu. Akusoloko kufuneka ulandele isitayile se-anime okanye imidlalo, enyanisweni, unokufumana uyilo olupholileyo kunye nezitayile ezichaseneyo, ezinjengezemveli okanye ze-neoclassical. Nangona kunjalo, eyona nto ibalaseleyo yikhathuni, evumela i-aesthetic ecocekileyo okanye i-sketchy, eya kuba luyilo olugcwele ukukhanya kunye nokunyakaza.
Ekugqibeleni, Ungalibali ukuba ukufumana uyilo olulolwakho ngokupheleleyo unokongeza ezinye izinto kuyilo. Umzekelo, kunye neqabane lam ngamnye sinxiba umdlalo wevidiyo owuthandayo womnye uzifihlayo (okanye into efanayo, unxibe ikhonkco eliguqulwe njengeBulbasaur kwaye ndinxibe iBulbasaur eguqulwe njengekhonkco), nangona ukhetho lungenasiphelo. .
I-Pokémon luphawu lobuntwana bethu, kutheni kungenjalo, inokuba sesona sizathu sokufumana tattoo Ngamana ingahlala ngonaphakade kwaye ukhwaze kwihlabathi ukuba ungumqeqeshi!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iindidi zeetattoos » Iimpawu zomntu » I-Pokémon tattoo: zifumane zonke!